Ala ọmajiji siri ike kpara àgwàetiti Sumatra nke Indonesia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia » Ala ọmajiji siri ike kpara àgwàetiti Sumatra nke Indonesia
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Enweghị akụkọ ọ bụla gbasara mmerụ ahụ na-eso ala ọmajiji ahụ, nke dara obere oge ka etiti abalị n'oge obodo (5pm GMT).
Ọtụtụ puku ala ọma jijiji na-ama Indonesia kwa afọ.
Nnukwu agwaetiti Sumatra nke Indonesia nwere ihe karịrị nde mmadụ 58.
Ala ọmajiji ahụ ruru nha 6.2 na enweghị ọkwa mbufịt e nyere n'ụra ya.
Ụlọ ọrụ US Geological Survey (UGS) kwuru na edekọla ala ọma jijiji siri ike dị nha 5.9 n'akụkụ ugwu ọdịda anyanwụ agwaetiti Indonesia. Sumatra taa.
Dabere na Indonesia'S Meteorology, Climatology, and Geophysical Agency, ala ọmajiji ahụ ruru 6.2-magnitude.
Ọnweghị ọkwa gbasara mbufịt mbufịt enyela maka ala ọmajiji a.
Nnukwu agwaetiti Sumatra bụ ebe obibi ihe karịrị nde mmadụ iri ise na asatọ. Enweghị akụkọ ọ bụla gbasara mmerụ ahụ na-eso ala ọmajiji ahụ, nke dara obere oge ka etiti abalị n'oge obodo (58pm GMT).
Dịkarịa ala, mmadụ atọ nwụrụ na ọtụtụ ndị ọzọ merụrụ ahụ mgbe ala ọma jijiji mere n'agwaetiti Bali na Indonesia na-ewu ewu n'October 16 wee bute oke ala. Otu nnukwu ala ọmajiji ruru 6.2 dara mba agwaetiti ahụ laa azụ na Jenụwarị, bibiri ọtụtụ ụlọ, gụnyere ụlọ ọgwụ, wee gbuo ihe karịrị 100.
Dị na mpaghara akpọrọ Pacific Ring of Fire - mpaghara nwere ụdị mgbanaka nke ọrụ seismic na-emekarị - Indonesia ọtụtụ puku ala ọma jijiji na-ama jijiji kwa afọ.